Biraj Bhatta & Nikita Chandak - मिस नेपालको फिल्म, अरु मिस नेपाल के के गर्दैछन
Topic: Biraj Bhatta & Nikita Chandak - मिस नेपालको फिल्म, अरु मिस नेपाल के के गर्दैछन
Author Topic: Biraj Bhatta & Nikita Chandak - मिस नेपालको फिल्म, अरु मिस नेपाल के के गर्दैछन (Read 1171 times)
« on: November 29, 2019, 08:30:04 PM »
मिस नेपाल २०१७ निकिता चाण्डकले सानै देखि नायिका हुने सपना देखेकि थिइन । अभिनय क्षेत्रमा नै भित्रिन मोडलिंग गर्न थालेकि चाण्डक मिस नेपाल बनेपछि उनि खुबै चर्चित भइन । मिस नेपाल प्रतियोगिता आयोजकसंगको सम्झौता सकिने बित्तिकै उनले फिल्म साइन पनि गरिन - रानिमहल नामको फिल्म । तर, फिल्मको शुटिंग नसकिंदै निर्माण रोकियो। पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेको जस्तो भएपछि निरास भएकि निकितालाइ नेपालि सिने क्षेत्रका पुराना एक्सन सुपरस्टार बिराज भट्टले दोश्रो मौका दिए । यो दोश्रो मौकाले उनलाइ नेपालि सिने क्षेत्रमा जमाउने लक्षण देखाएको छ ।
बिराज भट्ट्ले निर्माण र निर्देशन गरेको फिल्म "सांग्लो" यहि २०७६ सालको माघ २४ देखि प्रदर्शनमा शुरु हुनेछ । त्यहि फिल्ममा समावेश भएको गीत ‘चरीले काफल टिप्यो’ बोलको गीत आज मंसिर १२ गते सार्वजनिक गरिएको छ । लोकलयमा बनेको यो गीतलाइ राजनराज शिवाकोटी ले संगित भरेका छन । शिवाकोटिले गितको शब्द पनि आँफैले लेखेका छन भने पुरुषको स्वर पनि उनि आँफैले दिएका छ्न। सिवाकोटिलाइ गायिका मिलन नेवारले साथ दिएकि छिन ।
पहिला पहिला अरुहरुको गितमा नाच्दै गर्दा, कुनै दिन आँफ्नो पनि त्यस्तै गित हुने सपना देख्ने निकिताले गित रिलिज भएपछि खुबै उत्साहित हुंदै लेखेकि छिन - " हिजो सम्म मैले आँफुलाइ नजन्मेको कलाकार भन्थें । अब अहिले फिल्मको गित रिलिज भएपछि म भर्खर जन्मेको शिशु भएकि छु । धेरै कुरा सिक्न बाँकि छ, अझ पनि हुर्कन बाँकि छ ।"
उनि थप्छिन - यो क्षेत्रमा भित्रन मैले लामो समय देखि प्रयास गरिरहेकि थिएँ। भन्छननि सबै चिजको आँफ्नो समय हुन्छ। मेरो बिचारमा मेरो समय यहि हो । तपाइको प्रेम र आशिर्वादका साथ म एक नयाँ यात्रा तय गर्दैछु।"
भिडियोमा देखिएको विराज भट्ट र निकिता चण्डकको अभिनय राम्रो देखिएको छ अनि उमेरमा धेरै नै फरक भए पनि यि दुइ कलाकारको केमेस्ट्रि पनि राम्रो देखिएको छ । विराज लामो समय देखि अभिनय गरेका र निकिता पहिलो पटक स्क्रिनमा कम्मर मर्काएको फरक भने कत्ति पनि देखिएको छैन ।
एक दशक अघि बिराजको नेपालि सिने क्षेत्रमा ठुलो क्रेज थियो । त्यस बिच बिराजले भोजपुरि सिने क्षेत्रमा तहल्का नै मच्चाए । यस अघि बिराजले कमब्याक गरेको फिल्म "जय पर्शुराम" असफल भएको थियो । यो उनको आँफ्नै निर्माण र निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘साङ्लो’ सफल हुनु वा नहुनुले बिराजको क्रेज बाँकि रहेको वा नरहेको निर्धारण गर्नेछ । शिवम् अधिकारीको कथा मा बनेको यो फिल्ममा विराज र निकिताको साथमा जयनन्द लामा, कामेश्वर चौरासिया, प्रकाश शाह, आरपी पन्त, शिशिर भण्डारी, लय सङ्ग्रौला आदि कलाकारको अभिनय देखिनेछ।
यो फिल्मको गित तपाइलाइ कस्तो लाग्यो। के निकिता सफल अभिनेत्रि बनेर नेपालि सिने क्षेत्रमा जम्न सक्छिन होला ? नेपालि फिल्म क्षेत्रको इतिहास केलाउँदा धेरै॑ मिस नेपाल उपाधि बिजेताहरु ले सिनेमामा काम गरेका थिए । तर कुनै पनि मिस नेपाल सिने क्षेत्रमा जम्न भने सकेका थिएनन । के निकिताले यो रेकर्ड ब्रेक गर्लिन त ?
बोनस - बिगतका मिस नेपालहरु के के गर्दैछन ?
(पुरानो भिडियोमा केहि अपडेट मात्रै थपिएको)
मिस नेपाल २०१६ आश्मि श्रेष्ठ - मोडलिंग र अन्य क्षेत्रमा सक्रिय छिन ।
सदिक्षा श्रेष्ठले एआइटि थाइल्याण्डबाट उत्कृष्ट रिजल्ट ल्याएर एमबिए उतिर्ण गरेकि छिन । उनि अहिले मिडिया क्षेत्रमा सक्रिय छिन ।
निकिता चाण्डक फिल्म क्षेत्र र मोडलिंगमा सक्रिय छिन
मिस नेपाल् २०१८ सृंखला खतिवडा आर्किटेक्ट हुन । उनि अहिले बिउटि विथ अ पर्पोज को लागि बनाएको हेल्थपोष्टको निर्माण सम्पन्न गर्न र त्यसलाइ ब्यबस्थित गर्न सक्रिय छिन
बर्तमान मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ पनि बिजनेज बिषय पढेकि हुन । यो भिडियो बनाउँदै गर्दा उनि बेलायतको लण्डनमा मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा भाग लिंदै छिन ।